Forum serasera malagasy 13 Mai teny Mahamasina - Dinika forum.serasera.org
13 Mai teny Mahamasina
Fitohizan'ny hafatra : 13 Mai teny Mahamasina
ravatorano - 13/05/2003 12:00
Zà aloha tsy teny fany vaovao reko tao amin'ny Don Bosco tamin'ny 12 ora atoandro no entiko hitondrana azy.
Raha namotika ny estrade ny vahoaka tonga teny izay nanohitra an'ity fihaonan'ireto KMMR tarihin'i Mistery Pety sy Misitery Voninahitsy amin'ny "vahoakan'Antanananarivo" dia mahagaga sy mampimé ihany.Raha lazaina indray fa tsy mila korontana sy tabataba ny eto amitsika antananarivo dia iza ary no tena nikorontana sy nigidraka teny.
Marina fa tropin'ny very seza ry lerony ireo saingy izao no lazaiko eto Madagasikara dia "democratie théorique" no eto.
Tsisy democratie zany eto na iza mitondra eo na iza.
Zà dé nanao izay mba afako hampijoro ny fitondran'i Prezidà Ravalomanana ary mbola mikely aina amizany hatramin'izao toy ireo vahoaka marobe nifidy anazy.
Saingy izao raha naheno ny tenin'Ingahy Marson Evariste ny tena dia gaga .Tsy voafehiny ve Ingahy Voninahitsy tsy hanondrana oatran'io.Tsy voafehin'Ingahy Manandafy syIngahyRakotovazaha Olivier ve Ingahy Pety Rakotoniaina!
Izao no atao wé sangodi-panina politika.Ny ilany manohitra dia ny antsasany mankato .
MFM sy RPSD tena manoatra lavitra noho ny arema sy ny crn.
xxx - 13/05/2003 20:15
Za aloha de tsy teny Mahamasina fa tety an-tanàna ihany, noho ny antom-pivelomana. Nefa mankasitraka ny fihetsika nasehon'ny olona aho. "Loham-boto". Izay amiko ny dikan'ny fihetsika izay nasehon-dRaPety sy ny ekipany izay antsoiko hoe "Jiolahim-boto". Nahoana kay izy ireo no manakiana kanefa ireo mihitsy aza no tokony hokianina voalohany ? Efa leo ady seza koa sady 'zay madinika e! Raha misy tokony hatao izao dia ny MIASA TSARA sy ARAKA NY TOKONY HO IZY mba handroso amin'izay ity firenentsika ity. Farafaharatsiny mba hihatsara ny fari-piainantsika. Ity misy tsetsatsetsa tsy aritro e : tsy mba misy sazy azo omena ny olona mitonatonana toy ireny ve any amin'ny lalàna any e ?
xxx - 14/05/2003 18:16
Ny sazy aloha tsisy any amin'ny lalana satria fanehoan-kevitra ny azy.Nefa raha hitan'ny fanjakana fa diffamation tsotra izao no ataon'ireny dia tsitako izay tsy hitoriana sy hisamborana azy.Mety misy antony ve ao ?
Ny tiako ho singanina fotsiny dia izao nahoana ary amin'ity gov Atoa J.S ity no nomena andraikitra betska ny vicePM nohon'ny PM ?
tena tsy azoko ilay rafitra vaovao natsangan'Ingahy Ra8 iny.
xxx - 14/05/2003 12:32
Mazava izany Razoky a !
i Sylla anie ka olona tsy mahay na inona na inona fa endrika ivelany fotsiny e ! (Metisy vazaha, Betsimisaraka, Katôlika, ... )
Mampisy équilibre ny fipetrahany eo (réligion, régional indrindra tamatave, manalefaka ny Frantsay ) na dia bado aza izy. Ka ny hany hevitra dia ajanona eo izy fa tsy omena fahefana sa tria tsy mahay, dia vita kabary !!!
xxx - 14/05/2003 18:30
Ny maha metisy vazaha, betsimisaraka, katôlika azy ve no maha tsy mahay an'i sylla?
Ary tena vendrana kou izany i Zafy nandray azy ho Min Affaires etrangeres...
xxx - 15/05/2003 17:43
zà lou lé hiteny wé endrana i Zafy na i Sylla dia tsitako loatra ! fa ny zava misy eo amin'ny fitondrana ny raharahampirenano jereko.Raha praim ianao maninn no ny vice-nao no manana ny andraikitra makadiry be noho ianao.Marina fa goavana iany ny sosialy nefa rehefa tsy atokisan'ny prezidà amin'ny lafiny fitantanana ara bola sy fandraharahana ara ekonomika ianao dia ..... aoka fotsiny
matezà ny aina !
xxx - 15/05/2003 10:33
F'iza ary no miteny hoe tsy atokisan'ny prezidà ny praim e? Ny làlana no malaza dia ny VicePM no miandraikitra izany ka izany no mampalaza be azy. Izany akory tsy midika hoe tsy atokisan'ny prezidà ny PM...